प्रचण्ड कतिखेर के बोल्नुुहुन्छ ? त्यो ठेगान हुँदैन: मन्त्री लेखराज भट्ट
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आफूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बोलीको ठेगान नभएको नेताको संज्ञा दिएका छन् ।
आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भनेका छन्,‘अब छलफल गर्दै जाँदा कुनै निश्कर्ष निस्केन भने प्रधानमन्त्रीले ल त जे गर्ने हो गर्नुस भन्ने कुरा त भयो होला ।
तर पार्टी फुटाउने र पार्टीको बैठक नबोलाउने त हुँदैन र हुन सक्दैन । र अहिलेसम्म प्रचण्डले भनेका के आजसम्म सत्य भएको छ र भन्या ? प्रचण्डले जे÷जे बोल्नु भएको छ त्यो सबै सत्य छ र ? उहाँले भनेका सबै कुरा सत्य हुन सक्दैनन् ।
उहाँले कुन आवेसमा के बोल्नु हुन्छ भन्ने कुरा टँुडिखेलमा के बोल्नुभयो भन्ने कुरा थाहा छ तपाइँलाई ५ हजारको जिम्मा म लिन्छु अरुको जिम्मा अरुले लिनुपर्छ भन्ने कुरो पनि एउटा नेतृत्वले भन्ने कुरा नै होइन् ।
उहाँ त कतिखेर के बोल्नुुहुन्छ त्यो ठेगान हुँदैन् ।’ प्रस्तुत छ मन्त्री भट्टसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो रे ! हिजो प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो अरे ? प्रचण्डले यही भनेर हिजो खुमलटारमा सचिवालयका ६ जना नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको कुरा विफ्रिङ गर्नुभयो ?
-म पश्चिमतिर छु मैले तपाइँको न्युजबाट सुनेको हो । यर्थाथ कुरा के हो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन् । पार्टी नै फुट्ने कुरो त कसैको हित हुँदैन । प्रधानमन्त्रीजीले पार्टी फुटाउनु पर्छ भन्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन् ।
हैन प्रचण्डले भन्नुभयो हिजो, ६ जना सचिवालयको सदस्य राखेर आफुसहित प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भयो रे भन्दा–अब तपाईहरु अलग–अलग जानुस्, सँगै बस्न सकिँदैन र म पार्टीको निर्णय मान्दिन भनेर । तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
-प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउनुपर्छ भनेजस्तो लाग्दैन मलाई ।
हैन प्रचण्डले विफ्रिङ गर्नुभयो हिजो खुमलटारमा ?
-प्रचण्डले के भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त्यो त तपाइँ हामीसँग नभनि भन्यो भन्ने आधारमा त प्रचण्डले भन्यो भन्ने पनि लाग्दैन मलाई चाँही ।
हैन हिजो मलाई झलनाथ खनालले भन्नुभएको र नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभएको !
-अब उहाँहरुले के भन्नुभयो म त पश्चिममा छु । कसैसँग मेरो सम्र्पक भएको छैन् । म मन्त्रालयको काम र व्यक्तिगत काममा पनि लागेको छु । त्योभएर काठमाडौं
आइसकेपछि मात्र बल्ल भेटघाट भएपछि यर्थाथ कुरो थाहा हुन्छ । त्यसपछि मैले प्रतिक्रिया दिने कुरो हुन्छ । यो न्युज को पूरा लिङ हेर्न रिपोर्टरस खबर मा किल्क गर्नुहोला ।